"Waxaan Aaminsanahay In Arsenal Geli Doonto....." Arsene Wenger Oo Saadaaliyay Booska Ay Kooxdiisii Gunners Kaga Dhammaysan Doonto Premier League - Gool24.Net
“Waxaan Aaminsanahay In Arsenal Geli Doonto…..” Arsene Wenger Oo Saadaaliyay Booska Ay Kooxdiisii Gunners Kaga Dhammaysan Doonto Premier League
October 11, 2020 Apdihakem Omer Adam
Tababaraha halyeeyga ah ee kooxda Arsenal ee Arsene Wenger ayaa soo bandhigay aragtidiisa booska ay xilli ciyaareedkan kooxdiisii hore kaga dhammaysan doonto horyaalka Premier League kaddib markii ay qaab fiican uga adeegteen suuqii xagaaga.
Arsenal ayaa lix saxeex oo cusub balse muddooyin u kala dhexeeyeen lasoo saxeexatay iyadoo uu shaqsigii ugu dambeeyay ahaa Thomas Partey oo habeenkii suuqu xidhmayay kaga soo biiray dhinaca Atletico Madrid.
Arsenal ayaa go’aamisay inay joogto ka dhigto heshiisyada Pablo Mari iyo Cedric Soares walow ay labaduba ku fashilmeen inay wax muuqda ku muujiyaan Emirates Stadium isla markaana ay dhaawacyo saameeyeen.
Daafaca dhexe ee Gabriel Magalhaes ayaa kaga yimid dhinaca kooxda Lille halka uu Willian Borges qaab bilaash ah ugaga biiray dhinaca Chelsea oo ay London ku loolamaan.
Sidoo kale goolhaye Runner Alex Runnarson ayaa yimid kooxda si uu u buuxiyo booska goolhaye Emi Martinez oo Aston Villa ku biiray.
Arsene Wenger oo waraysi siiyay wargeyska The Guardian ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kooxdiisii hore ay ugu yaraan afarta kaalmood ee sarre ku dhammaysan doonto haddiiba aysan shaqo intaas ka fiican qabanin.
“Waxaan filayaa inuu jiro dareen xamaasadeed oo wanaagsan oo kooxda ka jira waxaana ay haystaan fursad wanaagsan oo ay wax fiican ku qabtaan” ayuu yidhi Wenger.
“Waxaan filayaa inaysan wax adag noqon doonin inay horumariyaan tiradii dhibcaha ahayd ee ay heleen xilli ciyaareedkii hore”
“Laakiin waxa iga dhaadhacsan in Arsenal ay afarta sarre geli karto, haddii aysan in ka badan samayn, maxaa diidaya inay wax ka badan sameeyaan?”